Goolhaye Gianluigi Donnarumma Iyo Qoyskiisa Oo Loogu Hanjabay Dil & Wakiilkiisa Mino Raiola Oo Wax Badan Kashifay - Laacib.net
Goolhaye Gianluigi Donnarumma Iyo Qoyskiisa Oo Loogu Hanjabay Dil & Wakiilkiisa Mino Raiola Oo Wax Badan Kashifay
by Saed Balaleti | Monday, Jun 19, 2017
Goolhayaha AC Milan Gianluigi Donnarumma ayaa loogu hanjabay in la dilayo intii uu wadahadalka qandaraas kordhinta kula jiray AC Milan, sida uu sheegay wakiilkiisa Mino Raiola.
Xiisada ayaa kacsaneyd isbuucaan ka dib markii Rossoneri ay ku dhawaaqday in 18 jirkaan tayada leh uu go’aansaday inuusan qandaraaska u kordhinin kooxda wixii ka danbeeya sannada 2018.
Iyadoo heshiis shan milyan yuro sannadkii uu miiska u saaran yahay, Donnarumma ayaa laga dhigay nin xun, laakiin Raiola ayaa sheegay in xaalada ay sidaasi ka adag tahay.
“Waa naloo hanjabay, Milan waa ay lumisay Donnarumma. Anigaa qaadaya mas’uuliyada go’aankiisa.” ayuu yiri Raiola. “Waxaa jiray xaalad cabsi iyo argagax oo la abuuray. Donnarumma waa loo hanjabay, qoyskiisa waa loo hanjabay.
“Waxaa loogu hanjabay inuusan ciyaari doonin sannadka ugu danbeeya qandaraaskiisa, waxaa loogu hanjabay dil, maamulka kooxda ma aysan fujinin boorarka isaga ka dhanka ah.
“Arinta marnaba ma aheyn mid dhaqaale, haddii ay jiraan labo dhinac oo doonaya in xal la helo, waa ay sameyn lahaayeen. Maamulka Milan waxa ay si qaldan u la dhaqmeen ciyaaryahan sarre sida Donnarumma.
“Waxaan doonayay inaan ogaado qorshaha Milan, laakiin waxaa durbaba la ii balanqaaday inaysan kooxda sii wadi doonin saxiixashada xiddigaha xorta ah.”